Otu esi etinye / Kwado RPM Fusion na Fedora 35 - LinuxCapable
November 15, 2021 November 15, 2021 by Jọshụa James
Chọọ maka ngwugwu
Mgbanwe nke RPM bụ ebe nchekwa ihe mgbakwunye maka Fedora na EL + EPEL nke otu ndị ọrụ afọ ofufo obodo na-edobe. RPM Fusion abụghị ebe nchekwa kwụ ọtọ mana ndọtị nke ngwugwu ndabara Fedora enweghị ike itinye n'ihi Fedora nwere otu mmachi iwu dị ka okpu uhie.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye RPM Fusion na sistemụ arụmọrụ Fedora 35 gị.
Ọrụ mbụ bụ ịlele ma agbanyerelarị nchekwa RPM Fusion. Mgbe ị na-etinye Fedora, ị nwere nhọrọ iji melite ebe nchekwa ndị ọzọ.
Ọtụtụ ngwa ewu ewu na-adịghị abanye na ebe nchekwa ndabere Fedora, dị ka Discord ma ọ bụ Telegram, nwere ike itinye ugbu a.
Wụnye ihe atụ Discord:
Wụnye ihe atụ Telegram:
Mgbe ahụ jiri iwu ajụjụ repo. Ihe atụ ga-aga n'ihu iji Discord.
Dị ka ị na-ahụ, ngwugwu Discord na-abịa site na RPM Fusion na-enweghị n'efu. Kwesịrị ekwesị, ị nwere ike iji search dnf ma lelee ya dnf repoquery iwu iji nyochaa ngwugwu ọ bụla na-eji njikwa ngwugwu dnf.
Iji wepụ ebe nchekwa na sistemụ Fedora gị dị mfe. Iji wepụ ebe nchekwa, ịkwesịrị ịchọta aha ma jiri dnf wepụ iwu, ma nke mbụ, jide n'aka na ị nwere aha zuru ezu. Enwere ike ime nke a site na iji iwu a.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye ebe nchekwa RPM Fusion n'efu yana enweghị n'efu yana ebe nchekwa ndị emetọghị na sistemụ arụmọrụ Fedora 35 gị.
Categories Fedora Tags Fedora 35, Mgbanwe nke RPM Mail igodo
Otu esi etinye XanMod Linux Kernel na Debian 11 Bullseye